धनकुटा घटनामा नयाँ रहस्य बाहिरियो यस्तो अचम्म लाग्दो बयान (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारधनकुटा घटनामा नयाँ रहस्य बाहिरियो यस्तो अचम्म लाग्दो बयान (भिडियो हेर्नुहोस्)
October 18, 2020 admin समाचार 11468
धनकु’टामा एक महि’लाले अनौठो र साह’सिक काम गरेको भन्दै समाचार सार्व’जनिक भएपछि अहिले सबै’को चासो त्यतै बढेको छ । अहिले युट्युव’हरुको लाइन धनकु’टामा ओइरिएको छ ।
युट्युवहरुमा सो घट’नाका बारेमा विभिन्न पा’टाका भिडियो सा’र्वजनिक भएका छन् । धनकुटा महा’लक्ष्मी १ मा कमला गुरुग नाम गरेकी एक महिलाले गलत मन’सायले कोठा’मा प्रवेश गरेका एक पुरु’षको ज्यान लिएको घटना सार्व’जनिक भएको हो ।
तर अहिले सो घटना रहस्य’मय बन्दै गएको छ । स्थानिय बासी’न्दाले दिल बहा’दुर गुरुगंको ज्यान कम’लाले नलिएर अरु कसैले लिएको आ’शंका गरेका छन् । उनीहरुले घट’नालाई प्रहरीले फरक ढंगले अनुस’न्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले घटना मिडि’यामा आए’जस्तो नभएर त्यस’को भित्रि रहस्य अर्कै भएको हुन’सक्ने बताएका छन् ।
छिमेकी र गाउँ’लेले कमलाका विष’यमा पनि केही नयाँ कुरा खु’लाएका छन् । छोरासंग बस्दै आएकी एक महि’लाको कोठामा एक छिमेकी पुरुष मध्यरा’तमा प्रवेश गरे । उनी कुनि’यत राखेर पुरुष महि’लाको कोठामा प्रवेश गरेका थिए । ति पुरुषलाई महि’लाले ज्यान लिएकी छन् ।
श्रीमान विदेश’मा रहेको अ’वस्थामा छिमेकी पुरुषले कुनियत राखेर घर भित्रै प्रवेश गरेपछि महि’लाले प्रतिकार गरेकी हुन् । ति पुरुष ढोका फोरेर मध्य’रातमा को’ठामा प्रवेश गरेका थिए ।
घटना भए’को अर्को दिन ति पुरुषको शव घर देखि करिब एक सय मिटर पर फे’ला परेको थियो । कटहरेकी ३० ब’र्षीया कमला गुरुङले अनैतिक काम गर्ने उद्देश्य राखेर कोठामा आएका स्थानीय लीलबहादुर गुरुङको ज्या’न लि’एकी’ हुन् । घटनाको अनुस’न्धानका क्रममा महि’लाले यस्तो वयान दिएकी हुन् ।
३० बर्षीय लील’बहादुर विवाहित रहेको र उनका दुई छोरा छन् । कमला”का श्रीमान् बैदेशिक रोज’गारीको सिलसि’लामा करिब १५ महिना पहिले दुवई गए’का छन् । उनी ११ बर्षे छोराको सा’थमा घरमा भएका बेला घटना भएको हो । -इताजा खबर बाट
कहाँ गायव भए महाभारतको युद्धमा मा’रिएका शव ?
प्रचण्ड नातिनी स्मिता र सलोनको बा’ल्यकाल देखिको प्रेम विवाहमा प’रिणत
घट्यो अमेरिकी डलरको मूल्य, कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
May 18, 2021 admin समाचार 6478
मंग’लबार (जेठ ४) एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११६.८४ रुपैयाँ र बिक्रिदर ११७.४४ रुपैयाँ काय’म भएको छ । अघिल्लो दिन एक डलरको खरिददर ११६.९६ रुपैयाँ र विक्रिदर ११७.५६ रुपैयाँ थियो । पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको मू’ल्य
सडकमा मानिसहरु किन नि’स्कन्छन्, भनि डाटा सं’कलन गर्दै प्रहरी
May 7, 2021 admin समाचार 5935
कञ्चनपुर प्रहरीले लकडाउनको सम’यमा सडकमा निस्केका मानिससंग बाहिर निस्क’नुको कारण माग्दै डाटा संक’लन गरी राखेकोे छ । जिल्लामा लक’डाउनको समयमा मनिस घर बाहिर निस्कन थालेपछि प्रहरीले सडकमा रोकी बाहिर निस्कनुको का’रण माग्दै कारण सहितको तथ्याङ्क
३३ वर्षीया नेपाली चेली राधा भन्छिन्, ‘म मुम्बईको अस्पतालमा सात महिनादेखि छु, मलाई ब’चाउनुहोस्’
June 18, 2021 admin समाचार 4915
कमाउन परदेश गएको बेला उतै रोग लागेर थलि’एपछि अवस्था कस्तो होला? यस्तै घ’टना अछामकी एक महिलालाई परेको छ । उनी श्रीमानसँगै कमाउन भारत गए’की थिइन् । तर राधा रावल विगत ७ महिनादेखि एक अस्प’तालमा भर्ना